Lithium oo Bilowday Inay Culus Ka Tahay Arimaha Bulshada | Martech Zone
Lithium wuxuu bilaabay inuu si dhab ah uga hadlo arrimaha bulshada
Isniintii, September 9, 2013 Talaado, September 10, 2013 Douglas Karr
Lithium wuxuu bilaabay taxane qosol badan oo fiidiyowyo iyo microsite cusub, Ka Dhigo Mid Culus Arimaha Bulshada si aad ugu raaxeysatid waxoogaa madadaalo ah Warbaahinta Bulshada isla markaana aad u siiso xoogaa wargeysyo macluumaad ah si ay uga caawiyaan shirkadaha istiraatiijiyadooda warbaahinta bulshada. Waxa kale oo ku jira a is qiimaynta. Fiidiyowyada waxaa ka mid ah:
Customer Adeegga iyo Warbaahinta Bulshada
Waa maxay Jeclku waa inay ku xirnaadaan Natiijooyinka Ganacsiga
Oo Lithium waxay gashaa bisadaha… In lagu maadsado shirkadaha isticmaala bisadaha
Miyuu Lithium runti u adeegsaday bisadaha si loogu maadeysto shirkadaha geeya xeeladaha warbaahinta bulshada bisadaha?
Qoraal dhinaceeda ah… Waxaan u maleynayaa inaan la shaqeeyay qaar badan oo ka mid ah jilayaasha fiidiyowyadan.
Tags: halis noqohel fiidiyowyo culuslithium
Everypost: Hal barnaamij oo moobil ah oo lagu daabaco meelkasta
Isbeddellada Suuq-geynta Macluumaadka ee 2013 B2B